कसरी बोराको लागि कपालको प्रयोग गर्ने
तपाईंको कपाल को उपस्थिति पुरा शरीर र गुणस्तर को हेरविचार को स्वास्थ्य मा निर्भर गर्दछ। बाल को एक शानदार सिर को लागि, तपाईं एक स्वस्थ जीवन शैली को नेतृत्व गर्न को आवश्यकता हो, साथ ही कपाल कस्मेटिक्स को चयन गर्नुहोस र प्राकृतिक उपचार को बारे मा न भूलें। शैम्पोहरू, बाल्म्स र कंडीशनरहरूले तपाईंको स्ट्यान्डलाई राम्रो देख्न मद्दत गर्दछ, तर प्रायः धुने, स्टाइल र आक्रामक बाह्य वातावरणले जरा र खोपडीलाई नकारात्मक असर पार्छ, जसले कर्लको कमीलाई निम्त्याउँछ।
कपालको सुन्दरता गार्डको लागि प्लाज्मा - एक बोरोक
कपालको लागि यसको रूट मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। बिरुवा बोरोक भनिन्छ। यसको विकृति र संक्रामक लोक चिकित्सा मा छाला रोग को लागि एक प्राणीत्मक उपाय को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। बिरुवाको जरा आवश्यक तेल र फैटी एसिड समावेश गर्दछ, जुन खोपमा फायदेमंद असर छ। यसैले, यदि तपाईं बालको जडलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, सुन्नको टाउकोको उपस्थितिले ताललाई मनपर्छ, तालहरू प्रयोग burdock को हेरचाहमा। आजको कपालको लागि, धेरै उपकरणहरू उपलब्ध छन्, जसमा तेल वा बोझको निकाल्दछ। तपाईं अलग से बोझको तेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जडहरूमा रस गर्न सक्नुहुन्छ वा मास्कमा थप गर्नुहोस्। खोपलको सन्तुलन सामान्य बनाउनुहोस्, डण्ड्रो मेटाउनुहोस्, जडलाई बलियो बनाउनुहोस् र खैरो कपालको समय भन्दा पहिलेको उपस्थिति रोक्नुहोस् - यी सबै कार्यहरू बोझको मूल हुन्छ । बालको लागि (प्रतिक्रिया पुष्टि भयो), बोझबाट धनको नियमित प्रयोग आवश्यक छ। केवल यो तरिका तपाईं खोपलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, सुनको टाउकोको अवस्था सुधार गर्नुहोस्। यदि तपाईं गर्नुहुनेछ समय समयमा यो लागू गर्नुहोस्, त्यसपछि खुजलीबाट छुटाउनुहोस् र हानि हटाउनुहोस्।
एक बोझको हो कि कोषको प्रयोगको लागि सिफारिसहरू
कपालको लागि, केवल आवश्यक रचनाहरू चयन गर्नुहोस्। सामान्य प्रकारको कपालको लागि, पतनबाट रोक्न, बोझको तेल हप्तामा धेरै पटक प्रयोग गरिन्छ। अनुप्रयोग भन्दा पहिले, तारहरू ठिकिएका छन् र विभाजित हुन्छन्, र त्यसपछि हल्का रङ्गीक आन्दोलनहरूको साथ खोपलमा हल्का फैलियो। सब्जी कणको साथमा राम्रो बाल हुन्छ । यो निम्न तयारी गर्नुहोस्: क्यालेन्डुलाको inflorescences संग मिश्रित बोझको कुचल जरा (अनुपात 1: 2), तातो पानी खान्थ्यो र कम गर्मीमा फोडा ल्याउँछ। 15-20 मिनेट पछि तपाईंले भाइरसलाई हटाउनु र निको पार्नु पर्छ। तपाईं प्रत्येक कपाल पछि आफ्नो कपाल कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हेरचाह खोपडी को अवस्था सामान्य गर्छ र जडलाई बलियो बनाउँछ। डण्ड्रफलाई लड्न र खुट्टा खुम्च्याउन, कण निम्नलिखित निम्न अवयवहरूबाट बनाइएको छ: नली, हर्सटेल, हप्स (कोन), यारो र बोझको। कपालको लागि, यो संरचना धेरै आवश्यक छ, किनकी यसले एक सामान्य अवस्थामा खोप दिन्छ, कर्ल स्वस्थ र चमकदार देखिन्छ। तैयारीको लागि, यो प्रत्येक घटकको एकै मात्रामा लिने, एक भाइरसमा राख्नु आवश्यक छ, उबलते पानी डाल्न र बलियो बन्द। आन्तरिक मिश्रण आधे घण्टाको लागि। यस्तो संरचना एक कुल्लाको रूपमा र छालामा रक्सीको लागि प्रयोग गरिन्छ। कपालको लागि बर्डक, यसको बारे सकारात्मक कुरा समीक्षाहरू, प्राचीन समयदेखि नै स्कपमा यसको लाभकारी प्रभावको लागि चिनिन्छ। यसको मतलब नियमित रूपमा हेरचाह स्वप्न स्वस्थ बनाउनेछ, जडहरूमा बलियो हुन्छ, र हरियो चमक बनाउनेछ।
बोटोक्स वा किरणिन सुधार: कुन कुरा के हो, उनीहरूको बीचमा के हो?
"केटो प्लस" - शैम्पू को लागि डण्ड्रफ
Flagella संग सौंदर्य। स्प्लिट कपालको लागि स्वस्थ कपाल कपाल
लामो कपालको लागि साइड मा फैशनेबल कपाल
मध्यम र लामो कपालमा सुन्दर स्टाइल: रोचक विचार, विशेषताहरू र सिफारिसहरू
मध्यम कपालको लागि केश हरेक दिन नयाँ छवि
आँखा twitching - अप्रिय र ध्यान विकृति आवश्यक
सडक कला संग्रहालय (सेन्ट पीटर्सबर्ग): घटनाहरू, ठेगाना र समीक्षा
गर्भावस्था र एचआईभी: एक स्वस्थ बच्चा भएको संभावना
ओछ्यानमा शिकर कबाब
कसरी सुनगाभाहरू सही पानी?
Jochen Rindt - अष्ट्रीया खेलाडी दौडने: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, दुर्घटना
एक वकील कसरी बन्न। एक वकील द्वारा प्रदान कानुनी सहायता को प्रकार
Gorishnii चिकना - युक्रेन को नक्सामा नयाँ ठाउँको नाम
स्वादिष्ट पाई कसरी गर्ने: स्किट्सको लागि एक नुस्खा
पुरानो परम्परा र नयाँ व्याख्याहरु
प्रयोगशाला विश्लेषण सूचक: मूत्र, पीएच - आदर्श र विचलन। को मूत्र को पीएच ले निर्धारण गरे जस्तै? जहाँ परीक्षण गर्न (मूत्र को पीएच)?